प्रधानमन्त्रीलाइ चरेसको थालमा मार्सी चामल उपहार ! - प्रधानमन्त्रीलाइ चरेसको थालमा मार्सी चामल उपहार !
प्रधानमन्त्रीलाइ चरेसको थालमा मार्सी चामल उपहार !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २८ असार 83 Views
काठमाडौं । डाक्टर गोविन्द केसीका समर्थकले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चरेसको थालमा मार्सी चामल उपहार दिएका छन् । डाक्टर गाविन्द केसीका माग पूरा गराउन दबाब दिने उद्देश्यले आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि प्रदर्शन गर्दै थाल र चामल उपहार दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मेडिकल कलेज सञ्चालकको घरमा बसेर जुम्लाको मार्सी चामलको भात खाने तर जुम्लामा एमबीबीएस पढाई नभएको र जुम्लामा अनसन बसेका डाक्टर केसीका माग पुरा नभएको भन्दै समर्थकले वालुवाटार अगाडी थाल र चामलसहित प्रदर्शन गरेका हुन् ।
तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रतिनिधिले भने मार्सी चामल र थाल उपहार लिन नमानेको समर्थक प्रितम सुवेदीले जानकारी दिए । ‘यो हामीले किन लिने लिन्नौं भन्दै उनले चरेसको थाल र चामल प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधिले बहिष्कार गरे, हामी चाँही नारा लगाएर फर्कियौं ।’ सुवेदीले भने । प्रदर्शनमा नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी, विद्यार्थी प्राध्यापक लगायतको सहभागिता थियो ।